အိမ်အသွင်အပြင် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -wallpro.com.tw
ပြင်ပက Wall ဆောက်လုပ်ရေး
ပြည်ထဲရေးက Wall ဆောက်လုပ်ရေး
နောက်ဆုံးပေါ် အိမ်အသွင်အပြင် အိမ်၏နည်းလမ်းအုပ်ကြွပ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအုတ်များနှင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်။ အာရှအရောင်းချန်ပီယံ, ဂျပန်ရဲ့နိပွန် အိမ်အသွင်အပြင် နည်းလမ်းပက်ဖြန်းနောက်ဆုံးပေါ်ယဉ်ကျေးမှုအုတ်, လျင်မြန်စွာအရေပြားဆွဲထုတ်ရန်သင့်ပြင်မြို့ရိုးကိုကူညီရေတိုဆောက်လုပ်ရေးကာလကသင်၏လူနေအိမ်စာငှက်တစ်ကောင်တစ် phoenix ဖြစ်လာစေသည်။
သို့တိုင်ထိုမွို့၌လှပပေမယ့်အဆောက်အဦပေါ်မှာဖုန်နှင့်အနာများအပြည့်အဝပါသောမျက်နှာစာ၌အမြဲတည်သော? အပြင်မြို့ရိုးကိုယဉ်ကျေးမှုအုတ်များ၏ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာ, ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအုတ်ကော်၏ခွန်အားမလုံလောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကော်နှင့်ဘိလပ်မြေမော်တာအကြား Interface ကိုပျက်စီးသည်ပြင်ပမြို့ရိုးကိုယဉ်ကျေးမှုအုတ်များ၏အလွှာဟာဖွဲ့စည်းပုံတိုးချဲ့သည်နှင့်ပြင်ပမြို့ရိုးကိုဆောက်လုပ်ရေးလျော်မြို့ရိုးအများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးသည်မဟုတ်, အောက်ခြေလုံးဝသန့်ရှင်းသည်မဟုတ်, ရွှံ့၏အထူအလုံအလောက်, ယဉ်ကျေးမှုအုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆင်းရဲသောသူကိုရေ retention ကို၏ရွှံ့ပစ္စည်းတွဲနေသည်မဟုတ်ပါ, ထို tile ကို paste လုပ်ထားတဲ့မီခြောက်သွေ့မြန်ခြင်း, ကြွေပြား, လုံလောက်အောင်နက်ရှိုင်းမဟုတ်ပါဘူး နှင့်အစွမ်းသတ္တိ, သံလိုက်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိချို့တဲ့နေကြသည်။ အုတ်များ၏တိုးချဲ့အဆစ်စနစ်တကျ, မြို့ရိုးကိုလောင်သောအသံ, လေးလံသောအစိုဓာတ်နှင့်နေရောင်ထိတွေ့ကုသကြသည်မဟုတ်, အနိမ့်သောအပူချိန်နှင့်တကွမိုဃ်းရွာနှင့်မကြာခဏငလျင်; နွေရာသီအတွက်ပြင်ပမြို့ရိုးကိုပူ 50 မှ 60 ဒီဂရီ, ရုတ်တရက်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုမိုးကြိုးဖြစ်ပါသည်, အပူချိန်ရုတ်တရက်အပြောင်းအလဲများဆုံးရှုံးစေ၏။ ထို့အပြင် retro အနီရောင်သံလိုက်အုတ်မြို့ရိုးကိုအစဉ်အမြဲထိုင်ဝမ်ရဲ့နှစ်ခု Ding ၏ပင်မဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းခဲ့ပေမယ့်ထိုကဲ့သို့ပြင်ပမြို့ရိုးကိုဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ခက်ခဲပေမယ့်လည်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေဖို့ပိုဖွယ်ရှိသာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံစံ - 2-5
အာရှအရောင်းချန်ပီယံ,ဂျပန်'နိပွန်နောက်ဆုံးပေါ်ယဉ်ကျေးမှုအုတ်နည်းလမ်းပက်ဖြန်း့,လျင်မြန်စွာအရေပြားဆွဲထုတ်ရန်သင့်ပြင်မြို့ရိုးကိုကူညီ,ရေတိုဆောက်လုပ်ရေးကာလကသင်၏အိမ်သူအိမ်သားစာငှက်တစ်ကောင်တစ် phoenix ဖြစ်လာစေမည်,ဆဲမြို့ပြဧရိယာကိုခံနိုငျရလှပ,မြို့ရိုးအအမှိုက်အပြည့်အဝနှင့်အနာ၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုးကို Is?ပြင်မြို့ရိုးကိုယဉ်ကျေးမှုအုတ်၏ပျက်စီးခြင်းနှင့် spalling ၏ပြဿနာကိုအဓိကအားဖြင့်အောက်ပါအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်:ယဉ်ကျေးမှုအုတ်ကော်၏ခွန်အားမလုံလောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကော်နှင့်ဘိလပ်မြေမော်တာအကြား Interface ကိုပျက်စီးနေသည်,နှင့်ပြင်မြို့ရိုးကိုယဉ်ကျေးမှုအုတ်များ၏အလွှာဟာဖွဲ့စည်းပုံပူးတွဲနေသည်.ခန္ဓာကိုယ်ဖောင်းနေသည်,ပြင်ပမြို့ရိုးကိုဆောက်လုပ်ရေးစနစ်တကျကုသမဟုတ်ပါ,အခြေခံအုတ်မြစ်ခြယ်သောအခါမြို့ရိုးလုံးဝသန့်ရှင်းသည်မဟုတ်.အဆိုပါယဉ်ကျေးမှုအုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆင်းရဲသားကိုရေ retention ကိုမြန်ဆန်ခြောက်သွေ့၏ဘိလပ်မြေပစ္စည်းအတူ flyer ဖြစ်ပါတယ်.အဆိုပါ tile ကိုပူးတွဲမီဒါဟာခိုင်မာနေသည်,နှင့်ရွှံ့များအထူမလုံလောကျ.အဆိုပါ tile ကိုလုံလောက်အောင်နက်ရှိုင်း embedded မဟုတ်ပါ,ပူးတွဲ၏ခွန်အားချို့တဲ့.အဆိုပါ tile ကို၏ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ကျုံ့စနစ်တကျစွန့်ပစ်မထားပါ,ထိုအုတ်ရိုးအက်နေသည်,ယင်းအစိုဓာတ်လေး,နေရောင်ပူ,မိုးရွာနိမ့်သည်,နှင့်ငလျင်မကြာခဏဖြစ်ပေါ်.မြင့်မားသောအပူချိန် 50 ရောက်ရှိ~60 ဒီဂရီ,နှင့်ရုတ်တရက်အကြမ်းဖက်မိုးကြိုးပစ်,ရုတ်တရက်အပူချိန်အပြောင်းအလဲသွန်းလောင်းဘဲစေသော.ထို့အပြင်,အဆိုပါ retro အနီရောင်သံလိုက်အုတ်မြို့ရိုးကိုအစဉ်အမြဲထိုင်ဝမ်၏ပင်မဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းခဲ့'s ကိုနှစ်ခု ding,ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောပြင်ပမြို့ရိုးကိုဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သာမခက်ခဲသည်,ဒါပေမယ့်လည်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေဖို့ပိုဖွယ်ရှိ.
သငျသညျယဉ်ကျေးမှုအုတ်သို့မဟုတ် retro အုတ်အနုပညာရဲ့အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်,ဒါပေမယ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစိုးရိမ်,နှစ်ခု၏ဆောက်လုပ်ရေး၏လုံခြုံမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ဇာတ်လမ်းအုပ်ကြွပ်,အဆိုပါ texture သဲအနုပညာယဉ်ကျေးမှုအုတ်ကျိန်းသေသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်.
အဟောင်းကို tile ကိုအိမ်သူအိမ်သားထွက်ခေါက်ရန်မလိုအပ်ရှိပါတယ်.
အဆင့် 1:အခြေခံအလွှာ level ကုသမှု
ဒါဟာ advanced နိပွန် Paint အပြည့်အဝချမှတ်-တစ်လောကလုံးအပေါ်ယံပိုင်းရှငျဘုရငျသအခုလဲအကျိုးသက်ရောက်မှု,သစ်တစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်သောဖြစ်ပါသည်-အစိတ်အပိုင်းအခြေစိုက်စခန်းအလွှာအပြောင်းအလဲနဲ့ထုတ်ကုန်.ဒီထုတ်ကုန်ဂျပန်အတွက်အကောင်းဆုံးအပြားအပေါ်ယံပိုင်းဖြစ်ပါတယ်,နည်းလမ်းချန်ပီယံကွာပြင်မြို့ရိုးကို,မြို့ရိုးကို level အမျိုးမျိုးတို့ကိုဟောငျး tile ကိုထွက်ခေါက်စရာမလိုဘဲ,ရေစိုခံ set တစ်လောကလုံးဆေးသုတ်ရှငျဘုရငျသ,ရိုက်သံ-ခံနိုင်ရည်,level,အပြည့်အဝ function ကိုပြန်လည်ပြုပြင်,မြို့ရိုးကိုပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးတို့ကို,နိပွန်အပြည့်အဝ Paint-တစ်လောကလုံးဆေးသုတ်သည်ရှင်ဘုရင်အခုလဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ချိန်ကဖြေရှင်း,စင်ကြယ်သောအရသာနည်းပညာ,ဖော်မြူလာအစိမ်းရောင်,မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပတွင်သုံးနိုငျ.ထိပ်-ဂျပန်တန်းအလွှာ'နိပွန်မှုစနစ်ကောင်းသောရေစိုခံခြင်းနှင့်အက်ကွဲနှင့်အတူ s-ခံနိုင်ရည်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုခြုံငုံမြို့ရိုးကိုမျက်နှာပြင်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းရေးသားထားပါတယ်နှင့်မလုံလောက်အလွှာဟာအပြောင်းအလဲနဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မြို့ရိုးကိုလောင်သောအသံနှင့်ရေ seepage ကာကွယ်ပေးသည်.
အဆင့် 2:primer ပန်းချီ
အဆိုပါ primer ထိထိရောက်ရောက်အခြေစိုက်စခန်းအလွှာအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တ္ထုများ၏စိမျ့တားဆီးဖို့အခြေခံအလွှာ၏ဆံချည်မျှင်သွေးကြောပေါက်တံဆိပ်ခတ်ထားရန်လျှောက်ထားသည်ကို,နှင့်တိုက်စားမှုကနေဆေးသုတ်မျက်နှာပြင်ကာကွယ်ပေးဖို့အလယ်တန်းအခြေခံအုတ်မြစ်အားဖြည့်ရန်.
ခြေလှမ်း 3:အဆိုပါလိုင်းဌာနခွဲဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်အရ,အဆိုပါ elastic လိုင်းများကွဲကွာနေကြ,နှင့်ခွဲဝေတိပ်အတားအဆီးဖြောင့်ခြင်းနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းကြောင်းသေချာစေရန်သွေးခွဲချုပ်တလျှောက်လိုက်နာနေသည်.
ဆောက်လုပ်ရေး site ၏အမှန်တကယ်အခြေအနေအရ,အဆိုပါဆေးသုတ်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ blended ပါလိမ့်မည်.တိကျခိုင်မာစွာဂျပန်နိပွန်ပြည်နယ်၏အဆိုအရ,အဟောင်းကိုအိမ်သူအိမ်သားအရေခွံသတ်မှတ်ချက်လျှောက်ထားပါလိမ့်မည်.အဆိုပါပေါင်းစုံ-Pass နှင့်ဆေးသုတ်ကိုအကောင်းဆုံးအခွအေနေမှမြို့ရိုးအဆေးသုတ်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်,ထို့နောက်မျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်နှင့်အညီဖြောင့်ပါလိမ့်မည်.အလျားလိုက်အသေးစိတ်အပြောင်းအလဲနဲ့.
အဆင့် 5:အဆိုပါ textured စက္ကူ Remove
ဒဏ်ငွေ Create-အနုပညာ grained နှင့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းများဖန်တီး.
အပြင်မြို့ရိုးကိုဆောက်လုပ်ရေးလုံးဝခြောက်သွေ့ပြီးနောက်,နိပွန် Paint လုံးဝကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအောင်မြင်ရန်အခြောက်များနှင့်ပက်ဖျန်းသို့မဟုတ်ထိုအုတ်ရိုးမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖျန်းဖြစ်ပါတယ်,ဆန့်ကျင်-fouling,ရေစိုခံတာနဲ့ဆန့်ကျင်-ရေညှိ,ဒါကြောင့်သဲအနုပညာယဉ်ကျေးမှုအုတ်အိမ်ကိုအသားအရေနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပြင်မြို့ရိုးအရှည်လျားဖြစ်နေဆဲခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့ကြောင်း.အသစ်ကဲ့သို့.
သို့: ChengLin Innovation Co., Ltd.
房屋拉皮	| House facelift	| Maison lifting	| Facelifting des Hauses	| Домашний косметический ремонт	| Facelift da casa	| Lifting della casa	| हाउस फेसलिफ्ट	| Lavado de cara de la casa	| Huis facelift	| تجميل المنزل	| Nhà mặt tiền	| บ้านดึง	| Facelift rumah	| বাড়ির মুখোমুখি	| Ev facelift	| 房屋拉皮	| House facelift	| Hus ansiktslyftning	| Dom facelift	| Facelift de casă	| Modernizacja domu	| Hus ansiktsløftning	| အိမ်အသွင်အပြင်	| Facelift rumah	| Куќиште	| domus facelift	| 하우스 성형 수술	| ការតុបតែងមុខផ្ទះ។	| ハウス改築	| Andlitslyfting húsa	| Առանձնատուն	| Ház arca	| Athchóiriú tí	| Talon kasvojenkorotus	| Maja näo tõstmine	| Σπίτι facelift	| Hus facelift	| Gweddnewidiad tŷ	| Dům facelift	| Лифтинг на къщата	| Дом падымае ліфты